Kuongorora Kwakaomarara Kunozoitwa Kumigwagwa Yakakwira Along Bayram | RayHaber | raillynews
mushaGENERALKuongorora Kwakasimba Kunozoiswa Mumigwagwa mikuru Panguva Yemutambo
23 / 05 / 2020 GENERAL, HIGHWAY, musoro wenyaya, LAST MinUTE, TURKEY
Munguva yezororo, kutarisa kwakasimba kuchaitwa mumigwagwa mikuru
Kunyangwe paine nguva yekudzoka munyika yose panguva yeEid al-Fitr, kutarisisa kwakatemwa kuchaitwa mumigwagwa mikuru.
Awove ezuva nezuva avhareji Mapurisa uye Gendarmerie panguva yeEid al-Fitr 18 zviuru 564 motokari vashandi kutora chikamu, uye panguva yezororo, mapurisa uye gendarmerie 111 zviuru 384 vashandi vachange vari pabasa.
Mukufambidzana mutyairi wekufambisa % 50 kuiswa kwesimba kunoenderera. The mvumo magwaro vomunyika yedu makore 65 uye pamusoro uye vaya vanopiwa mvumo kufamba mukati kutsanangurwa zvokurima zvigadzirwa wemukoho kumiswa. Model modhi yemotokari application ichaenderera kumatunhu uko traffic yakadzika. Mundima iyi 767 zvidimbu Mota yemapurisa yemhando yakaiswa mumigwagwa .. Kunyangwe paine nguva yekudzoka munyika, zvikwata zvemumigwagwa zvicharamba zvichidzora mumigwagwa panguva yeMutambo weRamadan. Kunyanya zororo iri; Negwaro remvumo yekufambisa, kuongorora kunowedzerwa mumigwagwa kuitira kudzivirira tsaona dzinogona kuitika nekuda kwesimba revaya vane makore makumi matanhatu nemashanu uye nevanopfuura nevamwe vavo kuti vaende kwavanoda, uye nevaya vanoregererwa kubva pamusha wevaya vanoenda kunokohwa kwekurima.
Munguva yeEid al-Fitr, avhareji yemazuva ese apurisa uye gendarmerie mumigwagwa yemafambisi 18.564 motokari vashandi zvichava pabasa. Zveshe panguva yezororo 59.052 motokari chikwata / chikwata uye Mapurisa naGendarmerie 111 zviuru mazana matatu nemakumi mana nevatatu vashandi.
Zvakare Ushumiri hwedu Ramadan Mabiko Traic Meyiwa Akatumira maseru kumatunhu makumi masere nemapfumbamwe ehurumende. Izvo zvakataurwa muRekisheni kuti kunyangwe zororo rakarongwa kwemazuva mana pakati pa 81-23 Chivabvu 26, matanho emigwagwa achaiswa kwemazuva matanhatu pakati pa2020-4 May 22.
Supervision Teams Kugoverwa kuCentral nzira
Kuona zviongororwa munzvimbo dzinotarisa pasuo uye pakubuda kwamaprovince kuitira kudzora vafambi vanopinda nekubuda mukati medhorobha mukati mechitanho chinotorwa nemasangano emigwagwa kuti ave nechokwadi chekufambisa kwakachengeteka kwevagari vedu uye nhanho dzekudzivirira kuparadzirwa kweCOVID-19;
kubva Mapurisa 24 inosanganisira vashandi 8 timu,
the gendarmerie 40 inosanganisira vashandi 20 timu yakapihwa basa.
Sezvo sezororo rega rega, zororo rino rinotarisa pane kudzora mweya. Mundima iyi 16 neherikoputa mudunhu 76 Kudzora kwetraffic kuchaitwa ne drone mudunhu.
767 Model Mapurisa Mota Dzakaiswa Pane Iyo Migwagwa
Model modhi yemotokari application ichaenderera mberi kuitira kuti iwedzere kuoneka kwevanofamba mumigwagwa munzvimbo dzinoparwa nemigwagwa uye tsaona dzinowedzera uye traffic yakaiswa mukati. 78 (mapurisa 767 / gendarmerie 420) mumatunhu 347Iyo Model / Model Traic Crew Vehicle yakaiswa zvakajeka munzira iyo njodzi dzakanangidzirwa, nemisoro yemagetsi uye mitsetse inoratidza.
Zvinyorwa Zvekufamba Zvichatsemurwa
50% kuiswa kwesimba kunoenderera muhukama kwekufambisa. Uye zvakare, mumigwagwa, goho rezvigadzirwa zvekurima, nezvimwewo, nevagari vanopfuura makore makumi matanhatu neshanu. Zvinyorwa zvemvumo yevagari vedu vane mvumo yekufamba zvakapihwa zvichatariswa. Zvitonga zvichawedzerwa kune zvivakwa uye pakati pezviteshi, uye bhazi rekufambidzana uye mafambiro epirate haringabvumidzwe, kunze kwekune nzvimbo uye nzvimbo dzinotenderwa. Mabhazi ese anoenda rwendo anozoongororwa, vatyairi vavo vachaziviswa nezvekusatyora mitemo, uye vatyairi nevatyairi kupfeka mabhandi echigaro mukati merwendo. Tichifunga nezve tsaona dzinosanganisira mabhasi, kunyanya pakati pe65-02.00 uye pakati pe08.00-05.00, uko kurasikirwa kwepfungwa nekuda kwekusagadzikana / kupera simba kwakaitika, vatyairi vanokokwa kunze kwemotokari, zvinodiwa kudzora nekuzorora zvichapihwa. Mumigwagwa mikuru yemafambisi emigwagwa, mabheoni anofanirwa kugara achichinjiswa. kuoneka kumberi, kune vatyairi Yakadzika Njodzi Yokubata Njodzi achachengetwa ari mupenyu nguva dzese.
Kutarisana kumeso kutarisana kuchasimbiswa
Munguva yekuongorora, vatyairi vemotokari vanomiswa panzvimbo dzinowanikwa mapoka evashanduri. Kumeso takatarisana kutaurirana Ichasimbiswa uye vatyairi vanouya kubva mumugwagwa murefu vachazorora.
Kuongororwa kweRadar kunoenderera, kunyanya pane nzira uko tsaona dzinoenderana nekukurumidza dzinosangana. Pazvimota zvese zvine urefu hwakareba hwemakumi maviri neshanu neshanu Avhareji Kumhanya ichaenderera kuongororwa. Mumakore matatu apfuura, matanho anoshanda uye akaomarara acharongwa nekuitwa munzira makumi maviri mumatunhu gumi nemasere, uko tsaona dzinowanikwa dzakanyanya mukati memazororo.
Munzvimbo dzemaguta, miganho yemigwagwa inowedzerwa mukufira, izvo zvinogona kushanyirwa nehama dzekutanga dzevateereri vedu. Munzvimbo dzine tsaona dzinofamba nemotokari zvakanyanya, nzira dzevanofamba netsoka, kuyambuka, nzira dzekupindirana, motokari dzakaremara pamberi nepamumugwagwa, dzinokanganisa kuchengetedzeka kwevanofamba netsoka, dzinobviswa nekukasira. Kuongorora uye mabasa eruzivo pakufamba-famba / kuchengetedzwa kuchaenderera pasina kukanganisa.
Mota dzinotakura vashandi vekurima mwaka hazvibvumidzwe kufamba pakati pe24.00-06.00. Zvekurima zvimota zvekurima, matirakiti, kusanganisa, nezvimwe. Ivo vachadzivirirwa kuti vatarise mumigwagwa vasingatore matanho ekuzvidzivirira.
MaTraffic Emota Anoteedzerwa Pamwe
Mukuongorora kwese; Muzviitiko zvedzidzo zvinoitirwa kudzidzisa nekusimudzira ruzivo nezvekuchengetedzwa kwemigwagwa kune vatyairi nevapfuuri Kupfupika kweHupenyu yakagadzirwa ne chirevo Hupenyu Matangi ichashandiswa zvinobudirira. Kutsvaga vatyairi vemumugwagwa nevashandi munzira uye kuongororwa kwavo pakarepo Kunyorera Tracking Project (UTP)Kubudirira kuchave kwakaitwa uye kuongororwa kuchaitwa kubva pakati.
pakati Trafiki Yetsaona Advisory Yuniti mamiriro emumugwagwa uye tsaona mudunhu rose zvichateedzerwa ipapo uye kupindira kuchapihwa.
Chikamu chakakosha chetarisheni mukuchengetedza yakachengeteka traffic traffic 34.218 Kune Yekuremekedza Traffic Inspector Ndiri kumba asi mitemo yemumigwagwa iri mupfungwa dzangu. Anoremekedzwa muongorori, kukanganisa kwese kwaunowana kunoponesa hupenyu. Tinokutendai nerubatsiro rwekuchengetedza traffic uye tinokushuvirai zororo rakanaka. Zvirinani Gore Rese muTraffic SMS ine zviri mukati ichaendeswa.
Migwagwa yepamusoro yekuongorora yakawanikwa
Migwagwa mikuru Inocheneswa gore rose muKocaeli
Post Kudzidzira muDursunbey, Balıkesir
Bus MuMutambo Wose MuAntalya, Antray, Nostalgic Tram Free
50 Yakabhadhara Kutengesa kuIstanbul
Kushamba kwekusununguka muAntalya
Red Bus, Antray uye Nostalgia Tram Free Pamusangano
Bhiriji risina hanya, mugwagwa mukuru uye kutakura kwevanhu mumutambo
Nzira dzepamusoro neBosphorus bhiriji dzisununguka munguva dzezororo
Vanhu Vanotakura Zvokufamba Free Along Manisa
Municipal Bus uye Tram Free
Kufambisa kwepasirose kwekufambisa
Model Traic Crew Vehicle
Trafiki Yetsaona Yetsaona
Tram uye Guta Mabhazi Munharaunda yose yeBaramram muGaziantep Free Of Charge
Guta Mabhazi Munguva yeBayram Panguva yeKamaman Free
Migwagwa Yevashandi Yakagadzira Mutambo Waviri
Zvose Zvinotakura Zviteshi Zvekutakura Zvinoshamwaridzana neMM Free